Top 10 Free Apps durdurka Android Videos in TV Apple c
Haddii aad qabto iPhone 5 ama 6 gacanta, Apple TV noqon doorashada No.1 inay sii qulquli videos in Screen weyn waa in. Inkasta oo haddii aad leedahay Samsung ama Google Nexus in jeebka, ka dhigan tahay Apple TV waxtar lahayn idiin sameeyo? Dabcan ma! Haddii aad qabto TV Apple ah guriga, waxaad u sii qulquli karaan wax files warbaahinta ka qalabka android shaashada weyn si habsami leh adigoo isticmaalaya taageerada qaar ka mid ah sida soo socda 10-barnaamijyadooda geeyo.
1. AirSync: Lugood nidaameed & AirPlay
Dadka maqlay DoubleTwist ka sii badan intii AirSync, inkastoo AirSync waa sababta dadka isticmaala qulquli karaan videos, sawiro iyo music u dhexeeya kala duwan. Marka download iyo rakibi DoubleTwist, guji checkbox ah si loo soo dajiyo AirSync iyo AirPlay waqti isku mid ah. Markaasay aad u sii qulquli karaan warbaahinta oo dhan files ee taleefannada android in TV Apple. Tani "AirPlay" ma aha "AirPlay Same" gundhig ugu Apple TV, halka taas oo uu leeyahay shaqo la mid ah. Ma jiro wax shuruud badan hoorto videos iyo sawiro, laakiin haddii aad rabto in aad sii qulquli music in qaar ka mid ah WiFi Guddoomiyaha ama garoonka diyaaradaha Express, waxay u baahan tahay OS Android 4.1 ama wax ka sareeya. Muuqaal kale oo u app, waxa ay taageertaa si kuu soo Lugood u hagaagsan wireless u music, sawiro iyo videos DRM-free aad Mac ama PC aad network WiFi guriga.
Ka dib markii ay ku rakiban AllCast, aad qulquli karo wax kasta oo aad Android inay screen weyn si toos ah oo lacag la'aan ah, in mid ka mid ah sababaha ay dad badan u jeclahay! Inkasta oo ay dejisay xad previewing, version xorta ah ee AllCast ayaa 5 daqiiqo daawashada xad ku saabsan sawiro iyo filimo. Kaliya cusboonaynta in version caymiska si meesha looga saaro xadka daawashada ah. Tashiil hoorto files deegaanka si ay TV, waxa sii qulquli karaan videos ka DropBox ama Google Drive ka dib markii login xisaabta in TV Apple. Waxa kale oo ay u taageeri karaan qalabka geeyo caan ah oo kale sida Chromecast, Amazon Naarta TV, Madaxweyne Siilaanyo 360, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, Roku, WDTV, Smart telefishin oo kale DLNA Renderers.
Haddii aanad garanayn app this abuuray by ZappoTV, waxaad u malaynaysaa laga yaabaa in ay iska leh Apple Inc. sidii markii ugu horeysay ee aan u ogaado. AppleTV AirPlay Media Player ma aha oo kaliya ciyaaryahan warbaahinta xoog badan, taas oo sii qulquli karaan sawiro, videos iyo music ka Android inay TV Apple habsami leh, waxaa sidoo kale tababare warbaahinta ah, taas oo ay taageertaa raadinta, ogaado iyo maarayn kuwa files warbaahinta. Waa maxay dheeraad ah, waxa ku jira ilo badan oo ka duwan sida Video Podcasts, YouTube, weerar Internet SHOUTcast, Facebook, Flickr iyo wixii la mid ah. Khasaare oo kaliya waa in ay taageertaa kaliya in ay sii qulquli in qaateyaasha airplay-karti.
4. rootiga tuur DLNA UPnP Player
Version xorta ah ee rootiga qulquli karaan music, sawiro iyo videos in Apple TV, Chromecast iyo DLNA Smart TV ka qalabka android si toos ah. Version ayaa pro ku jira Media shaqada Server, taas oo ay taageertaa in ay sii qulquli files warbaahinta online sida videos on YouTube iyo vimeo shaashada weyn. Waxa aan taageerayn uun heerka DLNA, sidoo kale diyaar u ah UPnP, taas oo macnaheedu yahay qalabka geeyo taageero dheeraad ah sida Hi-Fi: Denon, Yamaha, Onkyo, Harman / Kardon, Bose, Oppo oo dheeraad ah; Game consoles'ka: Madaxweyne Siilaanyo, Playstation (la Server Media); PC iyo software MAC: XBMC, foobar, Windows Media Player oo badan.
Feature ugu weyn ee app waa in la ogaado oo ku xirmaan kasta oo qalabka hoos shabakad isku si toos ah. Dhamaan dadka isticmaala doonayso in aad qabato waa in ay doortaan shaashadda xaq aad rabto in aad soo bandhigaan. iMediaShare sidoo kale fog kama dambaysta ah, taasoo noqon kartaa android u dirato, si aad u qabsato kartaa mugga, loo maqli karo, ama baddalaan videos la baaqyada touchscreen dareen leh. Tashiil TV Apple, waxa ay sidoo kale taageertaa Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, Hopper saxan iyo TV Smart.
More barnaamijyadooda android inay sii qulquli android videos in TV Apple soo socda:
Hadda waxaad haysataa 10 barnaamijyadooda qulquli karaan dhammaan faylasha aad saxaafada ka qalabka android in Apple TV, maxaa jira, haddii aad rabto in aad sii qulquli files deegaanka ka PC in Apple TV ? Ka fikir inaad isticmaasho Wondershare Video Converter Ultimate, taas oo gundhig leh Server Media, taas oo sii qulquli karaan wax files warbaahinta on PC in Apple TV / Roku / Madaxweyne Siilaanyo Oo / PS si toos ah. Download version maxkamad free hoos ku qoran iyo bilaabaan in ay haatan isku day!
> Resource > Android > Top 10 Free Apps durdurka Android Videos in TV Apple